06.03 Fantaro tsara Andriamanitra
Anio Talata 06 Marsa 2018 dia ny Levitikiosy 8.1-17, no sakafom-panahintsika ka hojerentsika hoe inona no baiko mipetraka sy ny fomba tokony hankatoavako izany eo amin' ny fiainako ?
2 Alao Arona sy ny zanany ary ny fitafiana sy ny diloilo fanosorana sy ny vantotr’ ombilahy iray hatao fanatitra noho ny ota sy ny ondrilahy roa ary ny harona misy mofo tsy misy masirasira.
3 Ary vorio ny fiangonana rehetra ho eo anoloan’ ny varavaran’ ny trano-lay fihaonana.
4 Ary Mosesy nanao araka izay nandidian’ i Jehovah azy; dia vory teo anoloan’ ny varavaran’ ny trano-lay fihaonana ny fiangonana.
5 Ary hoy Mosesy tamin’ ny fiangonana : Izao atao izao no raharaha izay nandidian’ i Jehovah.
6 Ary Arona sy ny zanany dia nentin’ i Mosesy nanatona ka nampandroiny tamin’ ny rano.
7 Dia nampiakanjoiny ny akanjo lava izy ary nasiany ny fehin-kibo, dia nampiakanjoiny ny akanjo ivelany izy, ary ny efoda dia nataony taminy, dia nasiany ny fehin-kibo momba ny efoda izy, ka nataony fehin’ ny efoda taminy izany.
9 Ary ny hamama dia nataony teo an-dohany; ary ny takela-bolamena, ilay diadema masina, dia nataony teo anoloana amin’ ny hamama, araka izay efa nandidian’ i Jehovah an’ i Mosesy.
10 Ary nalain’ i Mosesy ny diloilo fanosorana dia nohosorany ny tabernakely sy izay rehetra tao ka nohamasininy.
11 Dia namafazany impito teo ambonin’ ny alitara ny diloilo; ary nohosorany avokoa ny alitara mbamin’ ny fanaka rehetra momba azy ary ny tavy sy ny faladiany hahamasina azy.
12 Ary nanidinany teo amin’ ny lohan’ i Arona ny diloilo fanosorana, ka nanosotra azy izy hahamasina azy.
13 Ary dia nentin’ i Mosesy nanatona koa ny zanak’ i Arona ka nampiakanjoiny akanjo lava, ary nasiany fehin-kibo, dia nampisatrohiny, araka izay efa nandidian’ i Jehovah an’ i Mosesy.
14 Ary nentiny nanatona koa ny vantotr’ ombilahy izay hatao fanatitra noho ny ota; ary Arona sy ny zanany nametraka ny tànany tamin’ ny lohan’ ny vantotr’ ombilahy izay hatao fanatitra noho ny ota.
15 Dia novonoiny iny, ary nalain’ i Mosesy ny ra, ka notentenany tamin’ ny fanondrony ny tandroky ny alitara teo amin’ ny zorony efatra nanadiovany azy; ary ny ra sisa dia naidiny teo ambodin’ ny alitara, ka nahamasina azy, mba hanao fanavotana ho azy.
16 Dia nalainy ny saboran-tsinainy rehetra sy ny ila-atiny lehibe sy ny voany mbamin’ ny fonom-boany, ka nodoran’ i Mosesy ho fofona teo ambonin’ ny alitara ireo.
17 Fa ny hoditry ny vantotr’ ombilahy sy ny henany ary ny tain-drorohany kosa dia nodorany tamin’ ny afo teny ivelan’ ny toby, araka izay efa nandidian’ i Jehovah an’ i Mosesy
Ny fomba fanatonana an’Andriamanitra.
Arak’izay hevitr’Andriamanitra ihany, fa tsy ny an’olona, no tokony hanompoana Azy (4-5, 9b, 13b, 17b) na mikasika ny olona sy ny zavatra tokanana izany (2, 6, 10-11), na ny fitaovana (10,15) sy fomba fanokanana (6,10-12, 15).
Tsy ny tsy fanarahan’i Kaina ny fepetra momba ny fanatitra ve no tsy nahazoany sitraka tamin’Andriamanitra (Genesisy 4.3-5) ?
Ankehitriny koa dia asehon’Andriamanitra ny lalan-tokana hanatonana Azy dia i Jesoa Kristy izany (Jaona 14.6) .
Misy lalana hafa koa anefa izay heverin’ny olona hahitana famonjena fa mba aiza no iafarany (Ohabolana 16.25) ?
Ny akanjon’ny mpisoronabe (7,9) dia voatokana hanaovana fisoronana ihany ary torak’izany koa ny diloilo fanokanana izay tsy azo alain-tahaka (Eksodosy 30.31-33).
Ny atao hoe masina dia madio sy voatokana, tsy mifangaroharo amin’izao tontolo izao.
Ny fiainan’ny mpanaradia an’Andriamanitra ary dia tokony ho voatokana hanomezana voninahitra ny Tompo.
Ny rano, ny rà sy ny diloilo.
Vatana voadion’ny rano no entin’i Arona manompo (6) kanefa endrikin'ny fahadiovana ara-panahy takiana aminy koa.
Ny rà kosa dia sady manadio ny ota (2b, 14) no manamasina (15) tahaka ny diloilo izay manamasina ihany koa (10, 12).
Ny ràn’ny vatondr’ombilahy dia alokin’ny ràn’i Kristy (Hebreo 8.5) izay manadio ny mpino (1Jaona 1.7) fa ny diloilo kosa dia endriky ny Fanahy Masina izay manamasina (1Petera 1.2)
Ny fanokanana tamin’ny lasa dia tsy midika
fa hahita sitraka foana amin’Andriamanitra raha
tsy miaina amin’ny fahamasinana